ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုံးဝမပါဘဲ အန္တရာယ်တွေကြားက လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတာမို့ အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မီးနို… – Maythadin
May Thadin | May 30, 2021 | Celebrity | No Comments
အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်နေတဲ့ မီးနိုကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်
မီးနိုကတော့ လတ်တလောမှာလည်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်း စားသောက်ကုန်တွေအပြင် အဝတ်အထည်နဲ့ အခြားလိုအပ်တာတွေကို ကူညီလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် အန္တရာယ်တွေကြားကနေ လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမယ့် အပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လညါး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာပါတယ်
၇ရက်သားသမီး စေတနာရှင်တွေရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ပြန်လည်လှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်တွေ လှူဒါန်းမှုမှာအိမ်တိုင်ရာရောက် လာမယူပေးကြလို့ ပြစ်တင်ဝေဖန်နေသူတွေကို မီးနိုက ပြောပြထားတာပါ
“မီးနို တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါ ကိစ္စတစ်ခု ကိုကိုယ် တိုင်တာဝန်ယူနိုင်မှ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ် အဲ့လိုလူမျိုးကိုဘဲ နှစ်သက်တယ်။
မီးနို အခု အလှူကို လုပ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ် ချင်းစာတရားနဲ့ မေတ္တာ တရား ရှိ လို့ အခု လို အန္တရာယ်တွေ ကြားက ဘုရားနဲ့အတူ မီးနို တို့ team တစ်ခု လုံး လုပ်ဆောင်နေကြတာ အလှူရှင်တွေရော အားလုံးအားတတ်သရော ပါဝင်ကြတယ်။
အလှူငွေအပြင် ကိုယ် ကာယ အတွက် အားဆေး တွေ အဝတ်စားတွေ လာပို့ကြတယ် နယ် ကနေ လည်း အားတတ်သရော ပါဝင်ကြတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သောလူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် မီးနို တို့ကိုယ် ကျိုးအတွက်တစ်ခုမှမပါဘူး
ပထမအချက် သိစေချင်ပါတယ် ကျွန်မတို့ အားလုံးပင်ပန်းကြတာ ကျွန်မတို့ အသိဆုံးပါ အဝတ်စားလာမယူတာနဲ့ ဘဲ အပြစ်မတင်စေချင်ပါဘူး။
အပြစ်တင်စရာမလိုဘူး လည်းမြင်မိပါတယ် နားလည်ပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့မောင်နှတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်” ဆိုပြီးပြောပြထားတာပါ
သူမရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ခင်မင်းရင်းနှီးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း မီးနိုရဲ့ စိတ်ထားစေတနာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ကြတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြပါတယ်.
အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ မီးနိုကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြမွာ တတ္နိုင္သေလာက္ လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစပိုင္းကတည္းက ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ ရပ္တည္ေနသူပဲျဖစ္ပါတယ္
မီးနိုကေတာ့ လတ္တေလာမွာလည္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္လည္း စားေသာက္ကုန္ေတြအျပင္ အဝတ္အထည္နဲ႕ အျခားလိုအပ္တာေတြကို ကူညီလႉဒါန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ေတြၾကားကေန လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ အျပစ္တင္ေဝဖန္ေနၾကတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လညါး စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပလာပါတယ္
၇ရက္သားသမီး ေစတနာရွင္ေတြရဲ႕ လႉဒါန္းမႈေတြနဲ႕ လိုအပ္ေနသူေတြအတြက္ ျပန္လည္လႉဒါန္းေနတာျဖစ္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ အဝတ္အထည္ေတြ လႉဒါန္းမႈမွာအိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာမယူေပးၾကလို႔ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနသူေတြကို မီးနိုက ေျပာျပထားတာပါ
“မီးနို တစ္ခုေလာက္ေျပာခ်င္လို႔ပါ ကိစၥတစ္ခု ကိုကိုယ္ တိုင္တာဝန္ယူနိုင္မွ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္တယ္ အဲ့လိုလူမ်ိဳးကိုဘဲ ႏွစ္သက္တယ္။
မီးနို အခု အလႉကို လုပ္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ ခ်င္းစာတရားနဲ႕ ေမတၱာ တရား ရွိ လို႔ အခု လို အႏၲရာယ္ေတြ ၾကားက ဘုရားနဲ႕အတူ မီးနို တို႔ team တစ္ခု လုံး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ အလႉရွင္ေတြေရာ အားလုံးအားတတ္သေရာ ပါဝင္ၾကတယ္။
အလႉေငြအျပင္ ကိုယ္ ကာယ အတြက္ အားေဆး ေတြ အဝတ္စားေတြ လာပို႔ၾကတယ္ နယ္ ကေန လည္း အားတတ္သေရာ ပါဝင္ၾကတယ္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြအတြက္ေတာ့စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ မီးနို တို႔ကိုယ္ က်ိဳးအတြက္တစ္ခုမွမပါဘူး
ပထမအခ်က္ သိေစခ်င္ပါတယ္ ကြၽန္မတို႔ အားလုံးပင္ပန္းၾကတာ ကြၽန္မတို႔ အသိဆုံးပါ အဝတ္စားလာမယူတာနဲ႕ ဘဲ အျပစ္မတင္ေစခ်င္ပါဘူး။
အျပစ္တင္စရာမလိုဘူး လည္းျမင္မိပါတယ္ နားလည္ေပးၾကတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ေမာင္ႏွေတြအားလုံးလည္းေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္” ဆိုၿပီးေျပာျပထားတာပါ
သူမရဲ႕ ပို႔စ္ေအာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႕ ခင္မင္းရင္းႏွီးၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကလည္း မီးနိုရဲ႕ စိတ္ထားေစတနာေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြနဲ႕ အားေပးစကားေတြ ေျပာထားၾကပါတယ္.
ခုလိုကာလမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြောင့် မျက်စဉ်းဆေး မဝယ်နိုင်လို့ မျက်စိ ကွယ်နိုင် လော က်တဲ့ အခြေနေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူကြမ်း သရုပ် ဆောင်ကြီး ဦးဘဂျမ်း
ထက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကြောင့် အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်တော့မှာကို အားလုံးနားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် လို့ ဆိုလာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
ကိုဗစ်ကြောင့် အဖေနဲ့အမေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမှ ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတဲ့မချိန် အစ်ကိုဖြစ်သူကိုပါ ထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်တဲ့ ဗီဗာဟိန်း
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ‌တွေအတွက်အန္တရာယ်တွေကြားက လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်‌ပေးနေတဲ့ အဆိုတော် မီးနို ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း သိရ